DAAWO+FALANQEYN: Sidee kusoo gashay DP WORLD gudaha Soomaaliya, Maxaase keenay Hurgumooyinka siyaasadeed ee ay ku weyday Kalsoonida DF iyo Shacabka Soomaaliyeed? – Puntlandtimes
DAAWO+FALANQEYN: Sidee kusoo gashay DP WORLD gudaha Soomaaliya, Maxaase keenay Hurgumooyinka siyaasadeed ee ay ku weyday Kalsoonida DF iyo Shacabka Soomaaliyeed?
MUQDISHO(P-TIMES)- Magaceeda oo buuxa DUBIA PORT loona garan og yahay (DP WORLD) waa shirkad laga leeyahy dalka Imaaraatka Carabta oo inta badan u maamusha maalgashiga ay ku sameyso dawladda dalkaas dekedaha ka madax banaan dalkooda, waxayna maamushaa oo hagtaa Siyaasadda Maalgalinta ee dalkaas.
Kaliya uma xilsaarna ganacsiga, waxay kaloo leedahay Xaafiisyo si gaar ah uga shaqeeya arrimaha ciidamada oo ay hadba la jaan-qaadaan meelaha Mashaariicdooda laga fulinayo oo ay geystaan ugu yaraan dharcad iyo Sirdoon katirsan laanta ugu sareysa Boqortooyada Imaaraatka Carabta.
Magaceeda si weyn ayaa si weyn ugu faafay Geeska Africa, markii ay heshiis la gashay dawladda Jamhuuriyada Jabuuti, kaas oo ay ugu dhiseysa Dekeda Dooraale ee duleedka magaalada Jabuuti, waxana ilaa xiligaas uu magacedu ahaa mid kusii fidiyey geeska Africa oo muhiimad weyn ay u arkeen.
Si buuxda ayay Soomaaliya saameyn ugu yeelatay labadii sanno ee lasoo dhaafay, waxayna ka soo gashay dhinaca Somaliland, waxayna 5-tii September 2016-kii, heshiis la saxiixatay Somaliland, kaas oo ay kula wareegtay dekeda magaalada Bebera.
HALKAN RIIX SI AAD U DAAWATO XAQIIQADA HESHIISKAAS
6-dii April 2017- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wuxuu isna qalinka ku duugay heshiiska DP WORLD oo dhigayey in la dhiso Deked cusub oo laga dhiso Boosaaso, Iyana ay la wareegto howlaha maamul ee dekeddaas, waxaana lagu sheegay maalgalintaas 336Malyan oo Dollar.
Dubia Port waxay dhamaan heshiisyada ay lagashay Jabuuti iyo Soomaaliyaba ay ku bixisay Malaayiin Dollar oo ay ku sheegtay SOORYO, laakiin ugu dambeyntii la ogaaday in ay ahayd Laaluush si ay ku hesho sharciyadda heshiiskooda, taas oo qaarkeed maxkamad laysla tagay.
Labadii Xukuumood ee ay la gashay Heshiisyada ee Puntland & Somaliland waxay galisay Daganaansho la’aan siyaasadeed, bilowgii ugu horeeyey baarlamaanka Somaliland ayaa si adag ugu dagaalamay heshiiskaas socodsiintiisa, waxaana ka dhacay Feer iyo Dagaal gacmaha layskula tagay.
HALKAAN KA DAAWO FEERKA & DAGAALKA SOMALILAND
Laakiin ugu dambeyn Somaliland baarlamaankeeda ayaa lacag fara badan oo ay qaateen ka dib meelmariyey heshiiska, sidda ay sheegeen qaar kamid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulkaas oo warbaahinta la hadlay.
Puntland-na waxaa la rumeysan in hurgumooyin ka dhashay Heshiiska DP WORLD ay galaafatay Xukuumad dhan oo aan si buuxda ilaa hadda loo ogeyn ujeedooyinka ay meesha uga saareen baarlamaanka maamulkaas, 17-kii bishii July 2017-kii.
HALKAN KA DAAWO CEYRINTII WASIIRADDA PUNTLAND
Isla maalmahaas Is afgarad hoose ayay gaareen Madaxtooyada iyo golaha Wakiilada Puntland, waxayan Xildhibaanadu meelmariyeen heshiiskii DP WORLD & Xukuumadii ay rideen oo aan waxba badan laga bedelin, marka laga reebo afar wasiir iyo isku shaandheyn kooban.
HALKAAN KA DAAWO ANSIXINTII HESHIISKA DP WORLD ee PL
Hurgumo siyaasadeed iyo kuwa dhanka dhaqaalaha ayay dhexda u gashay DP WORLD, waxayna kaliftay in ay maalmo xirnaadaan qaar kamid ah dekedaha Boosaaso & Berbera oo ay la wareegtay waxayna wax ka bedeleen nidaamka Canshuuraha, sidaas oo kale hoos u dhac weyn ayaa lagu eedeeyey in ay u geystaan Dekedaha qaarkood.
Heshiisyadaas waxaa horey u saxiixay Madaxda Maamulada Puntland & Somaliland, waxayna iskaga mid yihiin mudada shirkadan Ajnabiga ah u ogolaanaysa in ay haystaan maamulka Dekedahaas oo ah 30 sanno, sidaas oo kale meelaha qaarkood waxaa dheer arrimo kale oo ay ku jiraan Saldhigyo ciidan.
MAXAY KA BILAABATAY SHEEKADA DP WORLD?
Xasaasiyada ku saabsan DP WORLD waxay banaanka u soo baxday 1-dii March 2018, ka dib markii Heshiis sadex geesood ah lagu saxiixay magaalada Dubia, kaas oo dhexmaray Somaliland, Itoobiya & Imaaraatka Carabta, qeexayeyna in la qeybsaday Saamiga mid kamid ah Dekedaha Soomaaliya oo ay la wareegtay Imaaraatka Carabta waxna laga siiyey Itoobiya oo aysan is jecleyn Soomaalida.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kusugnaa magaalada Dubia markii la saxiixayey heshiiskan, wuxuuna si aan gabasho laheyn markii uu ku laabtay Muqdisho, daaha uga rogay sidda aysan waxba uga ogeyn arrimaha Heshiiskaas, wuxuuna cod dheer ku sheegay in aysan aqbali doonin gabi ahaanba heshiisyada DP WORLD iyo kuwa shirkadaha shisheeye ay galayaan.
Somaliland oo ahayd cidda heshiiska gashay ayaa aad uga hadashay warka Raysalwasaare Xasan Cali Kheyre, waxayna gaarsiiyeen heer ay u arkeen mid dagaal ku dhawaaqay, waxaana Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadlayay March 8 2018, wuxuu ku dhawaaqay dagaal ay la galayaan Soomaaliya.
Mr, Biixi oo u muuqday mid aad uga carooday talaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay xataa hakiyeen wax kasta oo wada hadal ay kula jireen dawladda Faderaalka, taas oo ka dhigan fariin kale oo xasaasiyad lahayd.
DP WORLD oo xaaladda cirka kusii shareertay?
Madaxa ugu sareeya DP WORLD Sultaan Axmed Bin Suleymaan oo la hadlay warbaahinta gudaha ee dalkiisa wuxuu sheegay in aysan khuseyn amarka dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, wuxuu cadeeyey in ay Somaliland tahay dal madax banaan oo soo jiray 28 sanno ee lasoo dhaafay.
Taas waxay u aragtay dawladda Faderaalku in ay tahay mid loogu xadgudbayo Qaranimada Soomaaliya, waxayna Xildhibaanadu bilaabeen mooshin diyaarin ka dhan ah shirkadan iyo faragalinta Imaaraatka Carabta.
XIISADDA OO MAR KALE SII KULULAATAY?
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu shalay 10 March 2018 ka hor sheegay baarlamaanka Faderaalka in aysan ogoleyn in lagu xadgudbo Madaxbanaanida Soomaaliya, wuxuuna si duurxul siyaasadeed ah ugu jawaabay DP WORLD iyo IMaaraatka Carabta oo sheegay in aysan ogolaan doonin faragalin.
Duhurnimadii maanta baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya ayaa meelmariyey Qaraar si cad u sheegaya in shirkada laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta ee DP WORLD laga ceyriyo gudaha dalka, ka dib markii Madaxa ugu sareeya Shirkadan uu sheegay in qeyb ka mid ah Soomaaluya ka madax banaan dawladda Faderaaka ee sharciga ah.
Xaaladda Siyaasadeed ayaa isbedeshay, Qaraarka baarlamaanka Soomaaliya soo saarayna wuxuu sharciyad adag farayaa Shirkada DP WORLD, oo gabi ahaanba laga saaray Soomaaliya, waxaana aan la aqoon jawaabta ka imaan karta DP WORLD, Imaaraatka, Somaliland iyo cid kasta oo heshiisyadan qeyb ka ahayd.
Su’aalaha lays weydiinayo waxaa kamid ah Xaggee laga aadayaa wadadan? Maxayse tahay Jawaabaha laga sugi karro dhinacyada?